Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » komzila Ngoku » Ungajongana njani nabaThengi abanzima?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Uninzi lwehlabathi lifumana zonke iintlobo zeendudumo okanye ukulibaziseka okunxulumene nemozulu. Oku kubangela iindwendwe ezinomsindo kunye nesidingo sokuphinda sisebenze kuzo zonke iintlobo zeeshedyuli zokuhamba.
Yintoni ecaphukisa abathengi?
Kwi-hemisphere esemantla, inyanga ka-Agasti ihlala ibizwa ngokuba yi "iintsuku zeenja ”zehlobo. Eli gama livela kwinto yokuba kuhlala kushushu kakhulu nokuba inja ifuna ukubhadula ezitratweni.
Ukuphela kwehlobo ngokwesiqhelo ibikwangunyaka ophakamileyo wabakhenkethi kwihlabathi liphela. Umzi mveliso wezokhenketho unethemba lokuba emva kokudodobala kwezoqoqosho kunyaka ophelileyo u-2021 uyakuba lixesha lokuchacha.
Ukuba izitofu zisebenza ngoko i-2021 inokuba lixesha apho iinqwelomoya kunye neehotele zigcwele, kwaye imithambo yeendwendwe ihlala iphazamisekile. Le yinyanga apho izinto, zihlala zingaphaya kolawulo lobungcali kubakhenkethi, zihlala zibonakala zihamba gwenxa.
Nge-Agasti yinyanga elungileyo yokujonga ukuba yintoni ebangela ukuba abathengi bethu bacaphuke, indlela yokugcina ubushushu, kunye nendlela yokugcina ulawulo kwiimeko ezingalawulekiyo, ezinje ngokulibaziseka okunxulumene nemozulu. Ngexesha lokhenketho likwigiya ephezulu, thatha ithuba lokuvavanya izakhono zakho zokuguqula iimeko ezinzima ukuba ube yimpumelelo kunye nokufunda ukunciphisa umsindo kunye nokonyusa imveliso kunye nokwoneliseka kwabathengi. Ukukunceda usinde kweli xesha linzima kukhenketho, cinga ngoku kulandelayo:
Khumbula ukuba, kwilizwe lezokhenketho, kuhlala kukho ukubakho kwengxabano kunye nokungoneliseki kwabathengi.
Nokuba wenza ntoni, kuyakuhlala kukho abo bafuna ngaphezulu okanye abangonelisekiyo yile nto uyenzayo. Iindwendwe zihlawula kakhulu iholide yazo kwaye zifuna ukuziva zilawula, kwanakwiimeko apho kungekho mntu unolawulo. Phuhlisa iimeko apho umthengi enoluvo oluthile lolawulo nokuba lincinci kangakanani. Umzekelo, endaweni yokuthi nje into ayinakwenziwa / yenziwe, zama ukubiza impendulo njengenye indlela enokubakho.
Xa unika ezinye iindlela, qiniseka ukuba abasebenzi abaphambili bahlala bephaphile kwaye babonisa umonde. Rhoqo, ingxaki yezokhenketho ingashenxiswa hayi ngokusombulula yonke ingxaki, kodwa ngokuvumela umthengi ukuba azive ukuba uphumelele ubuncinci uloyiso.
-Yazi ukusikelwa umda kwakho ngokwasemthethweni, ngokweemvakalelo nangobuchule.
Zininzi izizathu zokuba abantu bahambe, abanye ukonwaba, abanye ishishini, kwaye abanye banesikhundla ekuhlaleni. Kwabo bakwiqela lokugqibela, kubalulekile ukuba iingcali zokhenketho ziqonde amandla standing okuma kwezentlalo ‰. Aba ngabantu abadla ngokungafuni ukuva izizathu.
Bayakhawuleza ukuba nomsindo kwaye bayacotha ukuxolela. Xa ujongene nabo, yazi ukuba yintoni ekucaphukisayo kwaye sele ufikelele kwimida yakho. Yiba nesilumko ngokwaneleyo ukuba uqaphele xa kusanda inkathazo kwaye luyakufuneka uncedo.
Ezokhenketho lushishino olucela umngeni kwimvakalelo yokuzixabisa. Uluntu lunokubanga kwaye ngamanye amaxesha lungalunganga. Rhoqo, kwenzeka iziganeko ezingaphaya kolawulo lwethu. Kula maxesha apho kubalulekile ukulawula uloyiko lwangaphakathi kunye neemvakalelo.
Ukuba amagama akho abonisa uluvo olunye kwaye ulwimi lomzimba wakho luchaza enye, kungekudala uza kuphulukana nentembeko.
-Ukhenketho lufuna iingcinga ezininzi.
Ezokhenketho zifuna ukuba sifunde indlela yokujongana neemfuno neemfuno zethu ngexesha elinye. Kubalulekile ukuba iingcali zokhenketho ziziqeqeshe kubugcisa bokuphathwa kolwazi, ukulawulwa kwemicimbi, kunye nokujongana nobuntu.
Ngexesha elinzima, abantu abaphambili kufuneka babe nakho ukwenza zonke izakhono ngexesha elinye.
Amaziko okhenketho aphumeleleyo ahambisa oko akuthembisayo.
Ezokhenketho zihlala zinengxaki yokuthengisa kakhulu kunye nezithembiso ezingaphezulu kokuzizisayo. Ungaze uthengise imveliso ekubonelelwa ngayo luluntu lwakho / umtsalane.
Imveliso yokhenketho ezinzileyo iqala ngentengiso ethembekileyo.
-Ienkokheli zokhenketho eziyimpumelelo ziyalazi ixesha lokuzibuza ngemvelo yazo. Ithuku linokuba luncedo olukhulu, ngakumbi ngamaxesha obunzima.
Kuxhomekeke kuphela kumathuku, nangona kunjalo, kunokukhokelela kwingxaki. Hlanganisa ulwazi lwendalo kunye nedatha enzima. Ngaphambi kokuthatha isigqibo, cwangcisa zombini iiseti zedatha ngendlela enengqiqo.
Ithuku lethu linokubonelela ngala maxesha anqabileyo wobukrelekrele, kodwa kwiimeko ezininzi zisebenzisa ukusekela izigqibo zakho kwidatha enzima kunye nophando olulungileyo.
-Amashishini okhenketho aphumeleleyo asebenza ekudambiseni imeko enzima kunokuba ayilawule.
Iingcali zezokhenketho kudala ziqonda ukuba ukungqubana kuhlala kuyimeko yokuphulukana. Impumelelo yokwenene iza ngokwazi indlela yokuphepha ukungqubana. Ngexesha lomsindo, lungela ukucinga ngeenyawo zakho.
Enye indlela yokufunda ubugcisa bokucinga ezinyaweni zakho kukuphuhlisa iimeko zongquzulwano kunye noqeqesho lwabo. Okona baqeqeshwe ngcono ukhenketho lwethu kunye nabasebenzi abaphambili, kokukhona baya kuba ngcono kulawulo lwentlekele kwaye bathathe izigqibo ezifanelekileyo.
-Yazi imeko etshintsha-tshintshileyo kwaye wazi indlela yokufumana amathuba kumaxesha anzima okanye angazinzanga.
Ukuba uzifumana ungquzulwano, qiniseka ukuba uyiphethe ngaphandle kokutyumza umthengi wakho. Umceli mngeni kumhlaseli wakho ngendlela evumela umthengi okhathazekileyo ukuba abone impazamo yakhe ngaphandle kokulahla ubuso.
Khumbula ukuba ingxaki iqulethwe yingozi kunye nethuba. Funa ithuba kuyo yonke ingxaki yeshishini lokhenketho.
-Zama ukwenza umthengi onomsindo kwiqela lakho.
Xa uzama ukoyisa umthengi onomsindo, qiniseka ukugcina unxibelelwano oluqinisekileyo lokujonga kwaye ube nethemba kumagama owasebenzisayo nakwithoni yokuthetha esetyenzisiweyo.
Vumela umthengi aqale akhuphe kwaye athethe kuphela emva kokuba kugqityiwe ukuvala, ukuvumela umthengi ukuba aphumeze, nokuba amazwi akhe angalunganga kangakanani, yindlela elungileyo yokubonisa ukuba uyamhlonipha nokuba awuvumelani.
Kuyingozi kangakanani ukuhamba? Buza uGqirha Peter Tarlow! Ukhenketho olukhuselekileyo:
UPeter Tarlow nguMququzeleli we- Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi, umbutho wobulungu kwihlabathi liphela kunye neengcali zokhenketho kwicandelo likarhulumente nakwabucala kumazwe ali-127 njengamalungu.
Ngolwazi oluthe kratya kunye nobulungu yiya ku www.wtn.travel
UGqr. Tarlow ukwakhokela uKhenketho oluKhuselekileyo, umhlobo we Ukuhamba kweqela leendaba kunye nefemi yokubonisana. Okungakumbi www.wfwasecity.com